सेल्फ क्वारेन्टाइनमा शारीरिक अभ्यास गर्दै वर्षा सिवाकोटी
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १२, २०७६, ०९:३८
काठमाडौं– सेल्फ क्वारेन्टाइन अर्थात् एकान्तवासमा हुनुहुन्छ तपाईं। के गरिरहनु भएको छ? कोरोनाको डरले शाररीक अभ्यास चटक्कै छाड्नुभएको कि? बाहिर निस्किन पाइएको छैन केको शाररिक अभ्यास भन्ने त होला नि। यो त बहाना हो । घरमै केही न केही गर्न सकिन्छ। नभए अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीलाई हेर्नुहोस् न। उनले आफ्नै घरको छतलाई शाररिक अभ्यासका लागि रोजेकी छिन्। दैनिक शाररीक अभ्यास र योगा गर्ने गरेकी छिन्। जुन सामाजिक सञ्जालबाट सेयर गर्ने गरेकी छिन्।
फिल्म ‘गोर्खा वारियर २’ को निर्माण घोषणा, मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने गोर्खाको नाममा फिल्म बन्ने र घोषणा हुने क्रम जारी छ। प्रदर्शनका लागि तयार भएर बसेको नेपाली फिल्म गोर्खे मात्रै हैन, गोर्खा बेनिथ द ब... मंगलबार, फागुन १८, २०७७